वामदेवको आरोप– बर्दियामा हराउनेहरू फेरि सक्रिय भए
काठमाडौं –काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन लागेको चर्चापछि राजनीति तरंगित भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता/कार्यकर्ता वामदेव प्रकरणमा विभाजित भएका छन् भने अन्य कतिपयले पनि यसको विरोध गरेका छन् । तर सांसद बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखेका गौतमले भने विकास निर्माणका लागि आफू प्रतिनिधिसभामा जान चाहेको बताएका छन् ।
गौतमले अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने बताएका हुन् ।
बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा नेता गौतमले संसद्मा धेरै सांसद भएपनि उनीहरूमा उर्जा नभएको र उनीहरूलाई उर्जाशील बनाउन पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने दाबी गरे ।
समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारलाई सफल बनाउन विकास प्राधिकरण महत्त्वपूर्ण भएको र त्यसमा नेकपाका दुवै अध्यक्ष सहमत भएको गौतमको दाबी छ ।
‘मैले के माग गरेको छु भने म प्रतिनिधिसभामा गएपछि विकास निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिनुस्, तपाईंहरू पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्न भने म आफैं गर्छु र निर्वाचन घोषणा पत्रमा भएका सबै कामहरू गरेर देखाउँछु,’ वामदेवले भने, ‘दुवै अध्यक्ष त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
त्यस्तो प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा ठूला विकासका काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
बर्दियामा हराउनेहरू फेरि सक्रिय !
नेता गौतमले आफूलाई संसदमा लैजाने कुराको विरोधमा पार्टीकै केही शीर्षस्थ नेताहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् । आफूले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएको कुरामा सत्यता नभएको नेता गौतमको भनाइ छ ।
‘रामवीर मानन्धरलाई मैले चाहिँ भनेको होइन आफैँ बुझेर मसँग भेट गरेर उहाँ तयार हुनुभएको हो,’ नेता गौतमले भने, ‘उहाँलाई जसरी हतोत्साहित गरिँदै छ, जसरी धम्की आइरहेको छ, जसरी उहाँलाई बदनाम गर्न खोजिँदैछ त्यो ती पत्रहरू हुन्, जसले बर्दियामा अन्तर्घातका लागि सबै किसिमका संरचना तयार गरेर काम गरे ।’
नेता गौतमले आफूलाई बर्दियामा पराजित गर्न पूर्व एमालेका केही शीर्ष नेता नै लागेको यसअघि नै आरोप लगाएका थिए ।
वामदेवलाई सांसद बनाउन रामवीरलाई राजीनामा गर्न लागइन लागेको चर्चाका बीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हार्ने अवस्थामा चुनाव नहुने बताएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेकपाको सीट गुम्नेगरी चुनाव नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेता/कार्यकर्ताले नै रामवीरको राजीनामा र वामदेवका लागि उपचुनाव गर्न लागिएको भन्दै विरोध जनाएपछि नेकपामा संकट आइपरेको छ ।
वामदेवलाई साथ दिइरहेका प्रचण्डले वामदेवले हार्ने अवस्थामा चुनाव नहुने बताएसँगै काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ७ मा वामदेव उम्मेदवार बन्ने सम्भावना लगभग टरेको कतिपयको बुझाइ छ । उसो त सचिवालयमा पनि वामदेवको पक्षमा कम सदस्य मात्र रहेपछि थप संकट चुलिएको छ ।
ओली नै असन्तुष्ट !
आफू पक्षधर सांसद रामवीर मानन्धरले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएपछि पार्टी अध्यक्ष ओली आश्चर्यमा परेका छन् ।
आफूसँग कुनै सल्लाह नगरी मानन्धरले प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाउनु शंकास्पद् भएको ओली पक्षको बुझाइ छ । मानन्धरले दिने भनेको राजीनामा र वामदेवको विषयमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा छलफल भइरहेको छ ।
रामवीरलाई कारवाहीको माग
पाँच वर्षका लागि जनताले चुनेका प्रतिनिधिले कुनै एक व्यक्तिका लागि पद छाड्न लागेको भन्दै रामवीर मानन्धरको विरोध भइरहेको छ । उनले जनमतको कदर नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध नै स्थानीय नेता कार्यकर्ता उत्रिएका छन् । रामवीरले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै नेवार बाहुल्य रहेको क्षेत्रको एक गुठीले उनलाई प्रदान गरेको सम्मान नै फिर्ता गर्नेसम्मको घोषणा गरिसकेको छ ।
यसैबीच एमालेको पूर्व जिल्ला कमिटीले पार्टी नेता कार्यकर्तासँग छलफल र सल्लाह नगरी राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै रामवीरको विरोध गरेको छ । बुधबार मात्र काठमाडौं प्रदेश ७ को ‘क’ र ‘ख’ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद वसन्त मानन्धर र प्रकाश श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका थिए । उनीहरूले रामवीरले राजीनामा गर्ने घोषणा गरेसँगै उक्त क्षेत्रको अवस्थाबारे अध्यक्षलाई जानकारी गराएका थिए ।
वर्तमान अवस्थामा वामदेव गौतमलाई निर्वाचित गर्न नसकिने र रामवीरको पछिल्लो क्रियाकलापले जनतामा आक्रोश सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो । नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताले जनभावनाविपरीत केही व्यक्ति र शक्तिको पछि लागेर निर्णय गरेको भन्दै रामवीरलाई कारवाहीको माग गरेका छन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने रामवीरको राजीनामा र गौतमको संसदयात्राबारे नेकपाभित्र अहिलेसम्म छलफल नै शुरू नभएको भन्दै पार्टी निर्णय पर्खनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी म्यानमाको नेपितमा, स्थानीयद्वारा पुष्पगुच्छा काठमाडौँ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यान्मा गणतन्त्र सङ्घका राष्ट्रपति ऊ विन मिन्तको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा म्यान्मा भ्रमणका क्रममा आज साँझ राजधानी नेपित आइपुगेकी छन् । उनलाई म्यान्मा सरकार...
५ हजार घुस लिने असईविरुद्ध अख्तियारले गर्यो आरोपपत्र दायर